समयका आधारमा मात्रै सर्ट फिल्म हो कि यसभित्र खास भिन्न चीज हुन्छ ? - संवाद - नेपाल
समयका आधारमा मात्रै सर्ट फिल्म हो कि यसभित्र खास भिन्न चीज हुन्छ ?
छोटो समयमा धेरै कुरा देखाउनुपर्ने हुँदा यसमा विशेष केही न केही त हुन्छ ।
सधैँ फिचर फिल्मका दर्शकले भरिने काठमाडौँका केही क्यूएफएक्स हलमा ३० कात्तिकदेखि ३ मंसिरसम्म सर्ट फिल्मका दर्शक देखिए । यस्तो अवसर जुराइदिएको थियो, एकादेशमा नामक अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिबलले । पाँच वर्षदेखि नेपालमा आयोजना हुँदै आएको यस्तो फेस्टिबलमा यसपालि ४३ देशका ९९ वटा फिल्म प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । सर्ट फिल्मका विषयमा फेस्टिबलका निर्देशक सोहम ढकालसँगको कुराकानी :
समयका आधारमा मात्रै सर्ट फिल्म अरूभन्दा फरक हो कि यसभित्र खास भिन्न चीज हुन्छ ?
मुख्यत: समयकै कारणले फरक हो, अन्य फिल्मभन्दा । फिल्म क्षेत्रमा सबैभन्दा कान्छो विधा भन्दा हुन्छ यसलाई ।
त्यसो भए त फिचर फिल्म नहेरी दर्शकले किन सर्ट फिल्म हेर्ने ?
छोटो समयमा धेरै कुरा देखाउनुपर्ने हुँदा यसमा विशेष केही न केही त हुन्छ । खालि यही हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन भनेको हो, मैले । छोटो समयमा ‘म्यासेज’ वा ‘मनोरञ्जन’ दिनुपर्ने भएकाले यसमा व्यक्तिको कलात्मकता र मिहिनेत बढी हुन्छ । चाहे त्यो कलाकारको होस् वा निर्देशकको ।
सर्ट फिल्मको आवश्यकताचाहिँ किन ?
पहिलो त तपाईंसँग कला, सिर्जना छ तर ठूलो बजेट छैन भने सर्ट फिल्ममार्फत दर्शकसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ । दोस्रो, सोझै फिचर फिल्म बनाउँदा तपाईंको लगानी डुब्ने जोखिम पनि त हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई सर्ट फिल्ममार्फत परीक्षित तुल्याएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । फिचर फिल्म बनाउनका लागि सिक्न पनि यो आवश्यक छ ।
यो फेस्टिबल गर्नुको लक्ष्यचाहिँ के हो ?
नेपाली सर्ट फिल्म मेकरहरूलाई ‘प्लेटफर्म’ प्रदान गर्नु । हामीले फेस्टिबलमा संसारभरका फिल्ममेकरलाई बोलाएका हुन्छौँ । उनीहरूसँगको अन्तक्र्रियाले हामीले केही सिक्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ ।
हामीले सिक्नुपर्ने कुराचाहिँ के–के रहेछन् ?
यो विधा संसारमै नयाँ–नयाँ हो । छोटो अवधिमा कसरी बुलन्द सन्देश प्रवाह गर्ने भन्ने हामीले सिक्न सक्छौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्दा नेपाली सर्ट फिल्महरूको स्थान कहाँ रहेछ ?
हामी सुरुआती चरणमै छौँ । सिक्दैछौँ भनौँ न † कथा भन्ने–बुन्नेमा हामी अगाडि नै छौँ तर प्रविधिमा अलि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सर्ट फिल्मको चुनौतीचाहिँ के हो ?
फिल्म बनाएर कहाँ, कसलाई देखाउने भन्ने नै अहिलेसम्मको ठूलो चुनौती हो । ठूलो पर्दामा यस्ता फिल्मले स्थान पाउँदैनन् । सर्ट फिल्मका लागि नाटकको जस्तो छुट्टै हल पनि छैन । दर्शक को हुन् भन्ने चिन्नै गाह्रो छ । त्यसैले हामीलाई दर्शकसम्म पुग्न नै कठिन छ ।
तर, अडियन्ससम्म पुग्न त अहिले युट्युब छँदैछ नि होइन ?
हो, त्यसमा पनि हामी अपलोड गर्न सक्छौँ । तर, त्यहाँ त अडियन्ससँग अन्तक्र्रिया हुँदैन । फिल्म भन्नासाथ पर्दामा हेरिन्छ, देखाइन्छ । त्यो अभाव छ हामीलाई ।
त्यसो भए अहिले तपाईंहरू कसरी दर्शकसम्म पुगिरहनुभएको छ ?
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा यस्तै फेस्टिबलको आयोजना हुन्छ । त्यहाँ भाग लिन्छौँ । त्यसबाहेक युट्युबमार्फत दर्शक खोजिरहेका छौँ ।
कस्ता विषयवस्तु टिपिन्छ, सर्ट फिल्मका लागि ?
यस्तै भन्ने छैन । गाउँ–सहरकै कथा त हो नि ! समाजकै घटना, प्रवृत्तिलाई उन्ने त हो नि हामीले । यो त निर्माता, निर्देशकको दृष्टिमा भर पर्छ ।